Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » Record Tourism na Hawaii bụ ọhụrụ na-atụghị anya nkịtị: Agwala onye ọ bụla!
Record Tourism na Hawaii bụ ọhụrụ na-atụghị anya nkịtị: Agwala onye ọ bụla!
Mgbe otu afọ nke ịgbachi nkịtị na Hawaii Tourism Authority ga-aza ajụjụ na ọbịbịa World Tourism Network Zoom na Eprel 7. A na-akpọ ndị mmadụ ka ha sonye ma jụọ ajụjụ. Kedu otu Hawaii si mee ka ọtụtụ ndị ọbịa jiri nwayọ laghachi?
Nlegharị anya na Waikiki na-arị elu ọzọ. Ememe Ista a afọ a bụ Waikiki juru na ndị ọbịa.
Site na ndị njem nlegharị anya nke ụlọ, ụlọ oriri na nkwari akụ na ụgbọ elu na-edebe ihe ịga nke ọma a maka ndị na-ahụ maka ndị ọbịa na Hawaii bụ ihe nzuzo.
Ọnọdụ nke ọrịa na ọgwụ mgbochi COVID-19 nọ n'ọnọdụ. Isi ihe bụ idebe ya n'ọnọdụ iji mee ka Hawaii bụrụ ebe mbụ n'ụwa nwere ihe niile "na-adịghị mma."
N'ihe dị nso na ndị njem 20,000 kwa ụbọchị site na US Mainland kwa ụbọchị, ị ga-ewepụ ọtụtụ ụgbọ elu ebe, yabụ ndị njem nwere ike irute n'ụsọ osimiri oge ha rutere, Hawaii na-egosi ụwa etu njem njem nwere ike isi laghachi na nkịtị Aloha State - ọbụlagodi na-enweghị ndị ọbịa ụwa.
Waikiki na Easter Sunday
O yiri ka ụlọ nkwari akụ na ụgbọ elu chọrọ ka ndị mmadụ ghara ịma ama na "kama ikwu okwu", n'ihi atumatu ụlọ ọrụ.
O yikwara na ndị ọbịa ụlọ karị na-asọda osimiri ma e jiri ya tụnyere oge nkịtị.
N'ezie ndị na-efu bụ ndị Canada, ndị Japan, ndị Korea, ndị China, ndị Australia, New Zealand, Malaysia, Singapore, ndị Europe. Enweghi ndị mba ọzọ, mana ụlọ oriri na ọ restaurantsụ hotelsụ na ụlọ oriri na ọ areụ areụ na-arụsi ọrụ ike, ụlọ ahịa anaghị enwe ike ijikwa ihe nkiri njem ụlọ ọhụrụ.
Ọ bụrụ na United States ga-emepe ókèala, na-ejikọ ụba ikike ụlọ na ụgbọ elu ọhụrụ, ahịa ụlọ ọhụrụ, Hawaii Tourism ga-alaghachi na nkịtị ma ọ bụ karịa n'oge na-adịghị anya. Ozi a ọ̀ bụ ozi ọma, ka ọ̀ bụ akụkọ na-emenye ụjọ?
Gịnị banyere nkewa mmadụ? Echefula ngbasa ndi mmadu na osimiri. Ọ dịghị onye na-ajụ, ọ dịghị onye na-akwado. N'ime ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ nri, ebe a na-ere ahịa, enwere amụma mkpuchi siri ike. Fọdụ ụlọ ahịa gụnyere Apple Computer ka nwere ụkpụrụ siri ike n'otu ebe iji nye ndị ahịa ohere ịhọpụta ha.
Nke a dị ka ọ dị ezigbo iche n'ọtụtụ ụlọ ahịa, ụlọ nri ma ọ bụ ebe ntụrụndụ.
Ọ na-ewe ihe na-erughị otu nkeji maka ndị na-eche na "Cheese Cake Factory" a ma ama iji hichaa ma dozie tebụl iri nri n'etiti ndị ọbịa.
Iwu idebe ihe ọcha adịghị n'ọnọdụ dị mkpa na nnukwu ụlọ oriri na ọ likeụ Cheụ dị ka ụlọ ọrụ achicha achicha, ebe ọtụtụ ụlọ nri ndị ọzọ na-elebara anya iji mee ka ntọala ha dị ọcha ma dị mma. Gee ntị na njikwa na Waikiki Cheesecake Factory bụ onye gwara onye ọbịa ka ọ kpọọ "Corporate" iji nweta nkọwa ihe kpatara ya.
Imirikiti ebe ndị dị n'ụwa anabatalarịrị na njem nleta agaghị alaghachi n'ụzọ ọ dị. Hawaii ọ bụ ihe pụrụ iche na ụwa?
Ọrịa COVID-19 na Hawaii ka bụ nke kachasị ala ma e jiri ya tụnyere United States ndị ọzọ mana ọ rịgoro na nso nso a. Hawaii na-eme ezigbo ọgwụ mgbochi. O yiri ka ọ bụ ọrụ na-emezi ihe dị n'etiti ọrịa na ogwu. Ikekwe na Hawaii, ọgwụ mgbochi na njem nleta dị na ndị mmeri n'oge a.
Na aku na uba on a na-agbasa ebe, elu na-enweghị ọrụ, nke a bụ maa a anabata mmepe maka Aloha Steeti.
Ndị Hawaii Tourism Authority, ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem nleta na-adị jụụ n'oge nsogbu ahụ.
Na Wednesde, Eprel 7 Pattie V. Herman, VP Marketing & Mmepe Ngwaahịa Ndị njem nleta Hawaii ga-abụ ọbịa na a World Tourism Network mbugharị mkparịta ụka inye nkọwa ndị ọzọ ma zaa ajụjụ. eTurboNews ndị na-agụ akwụkwọ ka ha deba aha ha ma sonye. Gaa na https://worldtourismevents.com/event/is-hawaii-tourism-back/ ma sonye na mkparita uka a.